विद्यार्थीमाथि कक्षा कोठामै खुकुरी प्रहार ! - PUBLICAAWAJ
विद्यार्थीमाथि कक्षा कोठामै खुकुरी प्रहार !
प्रकाशित : बिहिबार, फागुन ३०, २०७५१२:३० पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
काठमाडौँ, लम्जुङको एक विद्यालयमा दुई विद्यार्थी समूह बीच खुकुरी हानाहान हुँदा १ जना गम्भीर घाइते भएका छन् । बेसीशहर नगरपालिका ३ स्थित लमजुङ माविका विद्यार्थीबीच भएको झडपमा कक्षा १० मा अध्ययनरत बिष्णुप्रसाद देउजा घाइते भएका हुन्।
एकै विधयालयमा अध्यनरत सञ्जीव तामाङको साथ ४ जनाले आक्रमण गरी देउजालाई घाइते बनाएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक सीता बरालले जानकारी दिएका छन् ।
सोही विद्यालयको होस्टलमा बसेर अध्ययन गर्दै आएका देउजा माथि भएको खुकुरी प्रहारले उनको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको कारण उनलाई लमजुङ सामुदायिक अस्पतालबाट ट्रान्सफर गरी थप उपचारका लागि काठमाडौं पुरयाईएको प्रधानाध्यापक बरालले बताएका छन् ।
देउजाको साथ विद्यालय कम्पाउण्ड बाहिरै तामाङ समूहले विवाद गरेको थियो । महाशिवरात्रिको दिन विद्यालयमा भएको फुटबल प्रतियोगिताका विषयमा भएको सामान्य विवादले उग्र रुप लिँदा उनीहरुबीच झडप भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले खुकुरी प्रहार गर्ने तामाङ समूहका ४ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडी बढाई सकेको बताएको छ ।
बैंकको एटिएम फोडेर चोरी गर्न खोज्ने पक्राउ !
१ करोड ५० लाख बराबरको यार्चागुम्बा बरामद
५२ वर्षीया गोरीमायाले खुर्पा प्रहार गरेर ८२ वर्षीय जेठाजु मारिन !
गुण्डागर्दीमा संलग्न चतुर अत्याधुनिक हतियार मेसिन गनसहित पक्राउ